Budada Raw Sunifiram (314728-85-3) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker Chemical'
Budada Sunifiram (DM-235) waa nooc ka mid ah nootropics. Waa nooc ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'piracetam' oo ka kooban xusuus, barasho, kor u qaadista niyadda …… ..
Capacity: 1285kg / bishii
Qalabka Sunifiram ee cagaaran (314728-85-3)
Kalluunka Sunifiram, oo sidoo kale loo yaqaan DM-235, waa horumar cusub oo xiiso leh oo ku saabsan garashada xoojinta dheeraadka ah. Waxay u dhigantaa qaab la mid ah cunsur-celinta istiraatiijiga ah laakiin waxay ku saabsan tahay saacadaha 1,000 ka xoog badan yihiin burcad-badeeda.
Kalluunka Sunifiram waxaa loo yaqaanaa inuu ku shaqeeyo kicinta waxqabadka glutamate reseptors iyo sii kordhinta wax soo saarka iyo sii deynta "barashada neurotransmitter" acetylcholine. Waxaa la aaminsan yahay in tallaabada asaasiga ah ee budada ah ee Raw Sunifiram ay tahay ampakin, taas oo macnaheedu yahay ka dib markii dhiig-yaraanta maskaxeed waxay ku xidhan tahay AMPA nooca glutamate ee maskaxda ku jirta. Tani waxay kicinaysaa wax soo saarka glutamate, oo ah neurotransmitter muhiim ah oo kaalin muhiim ah ku leh firfircoonaanta neerfurka.
Glutamate waa neurotransmitter-ga neefsashada ah ee muhiim u ah baaxadda synaptic, ama awooda dareeraha si loo yareeyo kororka ama hoos u dhaca waxqabadka. Dufanka Sunifiram ayaa sidoo kale loo maleynayaa in uu u dhaqmo sida kolinjeerka, sii kordhinta wax soo saarka iyo sii daayo neurotransmitter acetylcholine.
Kalluun Sunifiram ah (314728-85-3) Smamnuucista
Product Name Kalluun Sunifiram ah
Magaca Kiimikada DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) propan-1-mid, Piperazine
brand NAme Kalluun Sunifiram, DM-235
Molecular Wsideed 246.304 g / mol
barafku Psaliid 98-100 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid Xog lagama hayo
Biological Life-Life saacadood 4.5-6.5
SOlubility Qulqulka, hawo qalalan iyo hawo qalaji
Application Hagaajinta Xusuusta, Hagaajinta Barashada iyo Yaraynta Xasaasiyadda Xanuunka, iwm.
qaydhiin Sunifiram budada (314728-85-3) Tafaasiisha
Sunifiram (DM-235) waa daroogada loo yaqaan 'dumbpartine' sida daawada loo yaqaan 'ampakine-like', waa habdhogal ahaan la mid ah cunsur-celinta asotropics laakiin waqtiyada 1,000 ka xoog badan yihiin piracetam. Daraasad aad u yar oo ku saabsan hadda waa la heli karaa, laakiin daraasadaha horay loo sameeyey ee xoolaha ayaa tilmaamaya in ay noqon karto aotopic si aad ah waxtar u leh iyo sidoo kale daaweynta suurtagalka ah ee noocyo kala duwan oo neerfaha ah oo ay ku jiraan cudurka Alzheimer, cudurka Parkinson, iyo amnesia.
Sunifiram ayaa markii ugu horeysay lagu soo bandhigay 2000 aqoonyahanno ka tirsan Jaamacadda Firenze ee Talyaaniga. Cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in budada sunifiram ay kor u qaadi karto awooda maskaxda, niyadda, iyo tamarta xitaa marka la qaato qiyaas aad u hooseeya.
Sunifiram budada (314728-85-3) Mashruuca Waxqabadka
Habka ficilka sunifiramku waa mid aan la garanayn, laakiin waxaa loo yaqaanaa inuu shaqeeyo iyada oo kicinaysa waxqabadka glutamate reseptors iyo kordhinta wax soo saarka iyo sii deynta "waxbarashada neurotransmitter" acetylcholine.
Sunifiram waxay kicisaa xayawaanka glutamate, NMDA. Waxay kordhisaa qiyaasta glutamate (neurotransmitter) la keeno unugyada dareemayaasha maskaxda. Tani waxay gacan ka geysan kartaa dib u soo celinta hawlaha xasuusta ee maskaxda wax ka bedelay ama qallafsan.
Budada Sunifiram ayaa sidoo kale kordhiya wax soo saarka iyo sii deynta asetylcholine neurotransmitter. Acetylcholin wuxuu si dhow ula xiriiraa qaybaha kala duwan ee garashada, oo ay ku jiraan xasuusta, xawaarida barashada iyo kartida, sirta dareeraha ama awoodda si loo xalliyo dhibaatooyinka gaarka ah iyada oo aan lagu tiirsanayn dabeecadaha la bartay.
Faa'iidooyinka of Sunifiram budada (314728-85-3)
Hagaajinta Barashada iyo Xusuusta
Waxaa laga yaabaa in la hagaajiyo xoogsaarida, dhiirigelinta, iyo maskaxda maskaxda
Xilliga Xaaladda iyo Xoogga Tamarta
Hagaajinta Muuqaal iyo La Socodsiin
talinayo Sunifiram budada (314728-85-3) Qiyaasta
Iyadoo lagu salaynayo warbixinnada isticmaalaha iyo macluumaadka laga helay daraasaadka xayawaanka, qiyaasta 5-10 mg qaadatay ugu badnaan saddex jeer maalintii ayaa sida caadiga ah loo tixgeliyaa labadaba amaan iyo waxtarkaba. Waxay u shaqeysaa marka ugu horreysa ee la siidaayo.
Dhibaatooyinka ay keento of Sunifiram budada (314728-85-3)
Ilaa hadda, ma muuqato waxyeello farabadan oo ka yimaada budada sunifiram ee cilmi ama cilmi saynis.
Dhibaatooyinka dhinaca soo-saarka ah ee dadka isticmaala waa kuwa yar yar iyo kuwa ku-meel-gaadhka ah waxaana ka mid ah kordhinta heerkulka jidhka, dhadhanka dhadhanka iyo quudinta, madax-xanuun, nadiifinta sanka, kordhinta dareenka koritaanka muuqaalka iyo codka, iyo hurdo la'aan. Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusto in aan jirin wax cilmi ah bini aadaminimo ama tijaabooyin tijaabo ah.